Samy manana raha izay ambany tanàna foana e ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Dia manaitra ry zalahy (aza tezitra ianareo ry zavavy an fa tafiditra ao an-tsaiko ianareo na dia ry zalahy aza no voatonona) ny mahita ireto mpanao politika malagasy ireto. Fanamarihana : mpanao politika malagasy, izany hoe fanaovana politika amin’ny fomba malagasy na hita eto Madagasikara. Jereo ange e.
Ny talata 17 desambra dia niseho vahoaka teny Ambohipo ireo tanora sasany. Nitarika vahoaka hanatevin-daharana azy ireo izy ireo. Mpianatry y oniverisite hono ry zareo tanora ireo. “Niara-niasa tamin’ny kandida Rajaonarimampianina izahay. Vavolombelon’izany ny sary asehonay anareo. Tato ny foiben-toerana niasanay tamin’izany (TTF : nanondro trano eny an-toerana ireo tanora mpitarika ny hetsika natao ny talata 17 desambra ireo)” hoy i Berija, fa izany no anarana iantsoan’ny olona ity tovolahy mpitarika ity. “Maneho ny alahelonay izahay fa tsy nisy notanterahan’ny kandida Rajaonarimampianina ny fampanantenana rehefa tonga eo amin’ny toeran’ny filoham-pirenena izy” hoy ny feo re. Ireo mpianatra eny amin’ny oniversite ireo nihetsika eny andalam-be ireo.
Fa iarahana mahalala sy mandre ny hetsika ataon’ny vahoaka ambany tanàna. Kianin’izay ireo ny fitondrana fa lasan’ny karana ny taniny andaniny, ankilany koa lasan’ny mpanam-bola ny toerana malalaka natao tsena nivarotany sy niavotany tena. Maro ireo manetsika an’ireo vahoaka monina amin’ny faritra iva na ambany tanàna. Ny farany naseho vahoaka izao dia izany “Sahabe ho an’ny fihavanana malagasy” izany.
Naseho vahoaka tamin’ny 17 desambra teo io Sahabe io. Nambara olona 30 mianadahy no nanangana azy. Ramahafandrahona no nitondra ny teny fampahafantarana. Tsy re kosa no manao politika ry zareo na manao asa sosialy na inona no tena ilofosany. Ny mpiahy ity vondrona (plateforme) ity dia i Anthelme Ramparany, ministra amperinasa. Tonga nanotrona ity minisitra ity ny minisitry ny Rano, Rtoa Ndahimananjara Johanita. Tonga marobe koa ireo mpikambana tao amin’ny Kongresin’ny Tetezamita teo aloha. Mahavery fanahy mbola velona ihany ny mahita izany rehetra izany. Moa va tsy resaka politika no tena ao ambadik’ity Sahabe ity ? “Hiavo-tena no tanjonay” hoy ireo nananganana ny vondrona.
Ny tsikaritra hatreto dia fitaovana entina mifanatrika amin’ny hafa ity vondrona ity. Ny hafa tonga an-tsaina voalohany amin’izany dia ilay Voarabe. Ny Voarabe dia vondrona iray mamondrona ireo mipetraka amin’ny faritra iva ary tarihin’i Cyrille Rasambozafy izay mpikambana tao amin’ny Filankevitra Ambonin’ny Tetezamita tamin’ny fotoan’androny. Nokianin’ny minisi-panjakana misahana ny fanajariana, ny fitaovana sy ny fampitaovana, Rivo Rakotovao, i Cyrille Rasambozafy izay nolazainy fa manao fitaovana ireo olona eny Ankadimbahoaka izay miaro ny taniny. Raha izay fanambarana izay no andraisana azy dia nofohazina ireto olona nanangana ny Sahabe ireto ho fitaovana hifanandrina amin’ny olon’ny Voarabe. Mbola ho lavitra ny tena fampihavanana raha izay no zava-misy.
Fantatra fa efa nisy koa ireo olona nijoro fa hihavana ary tonga nanatona ny FFM mihitsy izy ireo. Olona izay nifanandrina, nifamono rehefa nentanin’ny mpanao politika nandritra ireo hetsika maro efa nisy teto amin’ny firenena. Ny talata 16 desambra teo ireo olona ireo no nijoro ary nanambara fa vonona hihavana.
Talohan’izany anefa dia tsaroana fa efa nampihavana an’ireo izay efa nifanandrina koa i Nadine Ramaroson tamin’ny fotoan’androny ary teny amin’ny sekoly Antohomadinika no nanaovany izany (2010 tany ho any izany).
Zary fitaovana hatrany ireo olona monina amin’ny faritra iva satria be mponina eny. Manaiky ho hatao fitaovana ihany ry zareo satria misy ny sitrany ahay amin’ireny hetsika ireny. Ny tena fampivoarana an’ilay faritra iva hatreto tsy mbola tonga. Tsy mbola hita izay fandaharan’asa maharesy lahatra ny fampivoarana fa fampisehoana fa samy manana olona raha izay ambany tanàna foana no resahina. Na Voarabe io na Sahabe dia hita fa resabe fotsiny hatrany. Ka nitondra azy teto amin’ny Tafatafan’i Talata. Dia amin’izao fotoan’ny Dadabe Noely izao tokoa dia mila mahazo kilalao ny zanaka aman-jafy ka tsy maintsy mihetsika ny lehibe eo antanana mitsakaraka amin’izay ahitana ny kilalao hapetraka eo amin’ny hazokrisimasy eny fa na dia ho hataon’ny olona kilalao aza ireo olobe ireo tsy “quoi” izany ! Ovao ny toe-tsaina e.